I-Semalt Expert - Yintoni i-Web Scraping?
Ukukhwa kwedatha (okanye ukukhwa kwewebhu) yinkqubo apho ikhompyutha yakho Inkqubo okanye isixhobo siya kukhipha idatha efanelekileyo kwiblogi yakho okanye kwisayithi ukwenzela ukuba isetyenziswe ngaphandle, ngezinye iinjongo. Kubantu abahlukahlukeneyo, ukubetha izandi kusisongela kodwa izixhobo zokuhlamba ziqhuba inamba enkulu yamasayithi imihla ngemihla kwaye inokukunceda ukuba uthathe idatha ebalulekileyo kumanqaku athile ewebhu ngaphandle kwexesha. Kuza kuthatha imizuzwana embalwa kwesoxhobo sokuqhafaza iwebhu ukuchonga, ukuqaphela, nokuhlela amaphepha ewebhu kunye nokujongana nolwazi olunzulu. Kodwa zikho iindlela ezithile zokuqinisekisa ukuba usebenzisa i-intanethi yezinto zokucoca. Ngale ndlela, unako ukujongana namaphepha ewebhu, imixholo, imifanekiso, imifanekiso, iividiyo, iimemelo kunye ne-infographic ngaphandle kwanoma yintoni ingxaki kwaye ungasindisa zonke ezo zinto kwikhompyutha yakho ngokufanelekileyo.
I-Engine Optimization (SEO):
Isithuthi esifike kwisayithi okanye iblogi inokuvela kumanani amashaneli, , ukuhlawula i-traffic, i-media media, ukuhanjiswa kunye ne-imeyile. Kubalulekile ukuphucula ukusebenza kwesiza sakho nge-SEO kwaye unciphise izinga lokunciphisa umlinganiselo kwinqanaba. Xa uhlamba isayithi lakho ngethuluzi le-web scraping, uya kukwazi ukujonga okanye uhambe kwiifayile ezinentsingiselo kwi-intanethi yakho..Ngale ndlela, uya kukwazi ukuhlela izinto ezibalulekileyo endaweni enye kunye nezinto ezingabalulekanga kwenye indawo. Ngaphezu koko, kuya kunceda ukuphucula ukuphuculwa kwenjini ye-site yakho njengoko umxholo walo uya kuba luncedo kwaye uninzi lwamagama abalulekileyo.
Bonke oomashishini bayazi ukuba uphando lweemarike luyingxenye ebalulekileyo yempumelelo yabo. Ukuba uzimisele ukusungula, utshintshe okanye ukwandise ishishini lakho, kufuneka wenze uvavanyo olufanelekileyo lweemarike malunga nezixhobo ezifanelekileyo ze-scraping web, ukuqinisekisa ukuba unokuziququzelela zombini umxholo onobalulekileyo kunye ongeyomfuneko njengemfuno yabathengi bakho. Ngamanye amazwi, singatsho ukuba kukho ubudlelwane obuqilileyo phakathi kophando lwemakethi kunye nezixhobo zokucoca zewebhu ngokufanelekileyo njengoko bobabini baya kusebenza ngecala ngokukhula koshishino lwakho.
Njengophando lweemarike, ukuvelisa izikhokelo kubalulekile ukukhula kwishishini kwi-intanethi. Ngokuxhomekeke kwitshati yakho, izikhokelo zinokukufumana idatha engakumbi kunye neenkcukacha zonxibelelwano zabathengi abanakho. Iinkqubo ezahlukeneyo zokucoca ngewebhu zingakunceda ukuba uququzelele umxholo wakho kwaye ufumane ingcamango yokuba zeziphi iintlobo zezikhokelo ezimele zenziwe kwi-intanethi ephumelelayo kwaye eneziqhamo.
Kufuneka ukhethe ukucoca kwiYelp, i-TripAdvisor, i-Zomato, i-Google, i-Trustpilot, i-Amazon, i-Business Business Bureau iiwebhusayithi ukuze ufumane ingcamango yokuba ngaba abathengi bakho banelisekile ngemveliso yakho kunye neenkonzo okanye akunjalo. Ngenxa yoko, kufuneka ujikelele kumasayithi eendaba ezentlalo kwaye uphendule iimveliso kunye nemikhiqizo ngamagama ukuba ube nombono woluphi uhlobo lweedatha abaye bachithwa kwi-intanethi. Ukuphononongwa okuhambelanayo kunye neenkcukacha zeshishini zenkcukacha ziya kukunika ingcaciso malunga nendlela yokuqhubela phambili nebhizinisi lakho. Kuya kunika neenkcukacha zobuthakathaka kunye namandla ukuze umthathe amanyathelo ngokungqinelana nolwazi lwakho Source .